Zimbabweans are Treated Like Animals in South Africa - Zim Man Tells President Mnangagwa. - Opera News
On several occasions, Zimbabweans had alleged that South Africans are lazy, xenophobic and alcoholic. Some of this accusation have contributed to the attitude of South Africans towards Zimbabwean nationals in recent times.
However, a Zimbabwean man known as Tondricka on Twitter has cried out to the President of Zimbabwe, Mr Emmerson Mnangagwa to come to their rescue over what he termed as animal treatment being meted on them by South Africans.
Tondricka said that there is nothing pleasurable about being a Zimbabwean living in South Africa. He blamed the administration of President Mnangagwa and ZanuPF for the poor economy in Zimbabwe and humbly asked him to step down.
According to Tondricka's statement on Twitter and it reads:
"Zimbabweans are not happy Mr Mnangagwa, We are being treated like animals in South Africa there's nothing happy about being a Zimbabwean living in Africa, all this happens to us because you and your ZanuPF destroyed our beautiful country, With all Due respect please Step down ED".
Emmerson Mnangagwa Mnangagwa South Africa South Africans Zimbabweans